SOMALI THINK TANK » Khilaafkii iyo Qirashadii Khudaarta!
You are here: Home / Culture, Featured Articles, Politics / Khilaafkii iyo Qirashadii Khudaarta!
Khilaaf adag ayaa dhex maray khudaar ka buuxday danbiil la dhigay dhanka waqooyi ee jikada. Khilaafka khudaarta ayaa si lama filaan ah ku billowday ka dib markii saddex moos ah oo ka laallaaday danbiisha dusheeda ku doodeen in ay yihiin laan-dheereyaal aan laga dabo hadli karin.
Xabad yaanyo ah oo bartanka danbiisha fadhisay ayaa qosol la dhacday ayada oo quursanaysa saddexda mooska ah ee la soo shirtagay laan-dheeranimada. Waxayna ku doodday in yaanyadu tahay laandheere aan laga maarmin waayo dhamaan dallac bilaashka iyo shak-shuukada aduunka laga dallaco waxay ka soo farcameen yaanyo.
Ansalaato daganayd dhanka waqooyi bari ee danbiisha ayaa doodii dalaq soo tiri, waxayna ayada oo suuroonaysa tiri: Heedhe bilaash baad u doodaysaan, waligiin miyaad aragteen asalaanto la’aanteed raashin dhadhan leh.
Dhowr mirood oo Canab ah oo waqooyi galbeed ka dagan danbiisha ayaa dusha sare ka daawanayay khilaafka sida lama filaanka u curtay. Markii muddo ay daawanayeen khilaafka socda waxay dooddii socotay ku darsadeen in miraha Canabka laga maarmo oo aysan qasab ahayn in marwalba la cuno, sidaa daraadeedna muranka danbiisha ka dhex socda ay ka madax banaanyihiin.
Khilaafkii khudaarta ee ka billowday danbiishii la dhigay dhanka waqooyi ee Jikada wuxuu u soo dhaadhacay khudaar daadsanayd miis yaallay dhanka koonfureed ee jikada.
Khudaarta daadsan miiska ka muuqda dhanka koonfureed ee jikada uma kala soocnayn sida khudaartii ku jirtay danbiisha oo kale waayo waa khudaar loo diyaariyay in lagu qararamsado cashada caawa.
Murankii danbiisha ka socday mid ka daran ayaa ka dhex billowday khudaartii daadsanayd miiska. Dhowr bas-baas gaduud ah oo gees ka daganaa miiska ayaa ku dooday inay ka awood badan yahayihiin basasha iska buuran ee marwalba booska ku ciriirisa khudaarta kale.
Xabad basal oo huruday dhanka kale ee miiska ayaa soo booday waxayna tiri ayada oo hamaansanaysa: bas-baas waa lagu yaqaanaa, bootadaada oo dhan waa daqiiqadaha ugu horreeya oo aad iska dhigtid wax kulul balse waan ognanay in karti kale aadan meesha ku haynin.
Khilaafkii u dhaxeeyay khudaarta wuu xoogaystay. Khudaar walbana waxay quursi iyo qab weyni u muujisay khudaartii kale marka laga reebo Toon muddo badan khudaarta kale u tilmamaysay in haddii si falsafadaysan loo fakero in qaab fudud lagu fahmi karo kaalinta iyo doorka dhabta ah ee khudaar oo dhan ka ciyaaraan ciyaarta guud ee nolosha ka socota.
Tusaale ahaan Toontu waxay arkaysay in muranka ka dhex socda khudaarta uusan muhiim ahayn waayo caawa waqtiga cashada marka la gaaro dhamaan qudaarta miiska daadsan oo dhan waxaa qararamsan doona qoyska muslimiinta ah ee maanta dhan ilaahay dartiis u soomanaa.
Muddo badan ayay Toontii ku dadaashay in khudaarta ku mashquulsan khilaafka micno darada ah la wadaagto fariimaha falsafaddu ka gubdinayso mustaqbalka dhabta ah ee khudaarta.
Nasiib darro markii maqribkii soo dhawaaday oo islaantii qoyska hooyada ka ahayd oo mindi wadata jikada soo gashay si loo diyaariyo cashadii caawa lagu afuri lahaa ayaa dhaman khudaartii ku mashquulsanayd khilaafkii macno darada ahaa isla qireen in aysan waxba is dhaamin waayo saacado kooban gudahood waxay u hoyan doonaan caloosha mugdiga ah ee dadka.
W/Q: Cabdullahi M. Cawsey